MPAMILY MPANAMPY TAXIBE ZOTRA FAHATELO : Noterena handoa roa tapitrisa Ariary
Sandan’ilay entana hadino tao anaty fiara. Sarika am-pandriana no natao tamin’ity tovolahy vao 17 taona monja, monina ao amin’ny faritra faha-7 fokontanin’Antanimalandy iny ny sabotsy 14 oktobra lasa teo. 19 octobre 2017
Naiditra vonjimaika tao amin’ny « violon » ’ny polisy Mahabibo ity mpamily mpanampy ao amin’ny zotra fahatelo, mampitohy an’Antanimalandy sy ny hopitaly PeZaGa Androva ity.
Raha ny tsiahy dia efa ho iray volana izay no nifandrirarira teny ilay mpitory milaza ho tompon’ilay entana hadino tao anaty taksibe io. Izay mazava ny peta-drindrina miranty ao anaty fiara fitateram-bahoaka rehetra fa tsy miantoka entana hadino na very izy ireo moa tsy izany ihany koa no anjara andraikiny. Kanefa dia noteren’ilay mpitory hatrany handoa ny entany i Fabien, ilay mpamily mpanampy ary niafara tamin’izao fisamboran’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany faharoa azy izao ny sabotsy teo.
Ka natolotra eny amin’ny Fampanoavana ny raharaha ny alarobia 18 oktobra teo. Ny nahavariana ny maro dia ity raharaha ity izay efa tsy nokitihina ary natao vary mangatsiaka vao notairina indray. Satria tokoa efa nangataka fampiakarana ny raharaha teny amin’ny Fampanoavana ny fianakavian’ilay tovolahy notoriana, saingy tsy nanao izany ny polisy mpanao famotorana fa nanery ankolaka ny mba hanao fifampiraharahana tamin’ilay mpamily mpanampy ihany ka izao tonga tamin’ny fisamborana tampoka izao indray ny raharaha.
Mpamily taksibe zotra fahatelo voakasi-tanana
Mbola ao amin’ny zotra fahatelo mampitohy an’Androva sy iny Antanimalandy iny ihany ny tranga niseho. Mpamily iray mamo an’ity zotra ity no lasibatry ny vono nataon’ilay mpiasan’ny tobin-tsolika Galana etsy Manjarisoa. Resaka karatra galana no anton’izany, izay niteraka fitohanan’ny fiara. Ny volana desambra tamin’ny taon-dasa no efa nohazonin’ity paompisita ity ny karatra fameran-tsolika izay ahazoana tamberim-bidy ho an’ny fiara mampiditra solika betsaka isan’andro.
Nangataka fiaraha-miasa moa ilay paompisita fa hampitomboina ny fatran’ny solika ary tombohana izy io avy eo. Arakaraka ny fetra atao no ahazoana io tamberina io, saingy tsy nanaiky ity mpamily ity ka nolazain’ilay mpiasan’ny tobin-tsolika fa izy ihany no hanao ny fanombohana io karatra io fa haveriny rahariva ny karatra rehefa vita tomboka. Tsy izany anefa ny zava-niseho fa hatramin’ity anio nanoratanay ny lahatsoratra ity dia tsy mbola naverin’ilay paompisita io karatra io.
Nitaraina ary ilay mpamily noho izao amboletra ataon’ity mpiasan’ny tobin-tsolika ity izao, fa nihizingizina tsy hamerina io karatra io ny andaniny. Ny tena nahazendana dia ilay mpamily nitaky io karatra io indray no nodarohan’ity mpiasan’ny galana ity teo amin’ny fihirifany sy ilan-kibony. Fanina ilay mpamily avy eo dia nanatona mpitsabo haingana nanao ny vonjy aina, ka nitondra ny raharaha tao amin’ny polisy Tanambao Sotema, izay mbola eo am-pikarohana ilay nahavanon-doza.
Ankoatr’izay dia mbola norobain’ity paompisita ity nandritra io fikasihan-tanana nataony io teo Bazary kely Sotema tamin’ny alatsinainy 16 oktobra teo koa ny vola 60 000 ariary sy ny finday marika techno tamin’ity mpampily taksibe ity, hoy hatrany ity farany.
Miandry ny fivoaran’ny raharaha ny rehetra fa toa gisa nangala-ketsa na koa mamo niantso polisy ka izy indray no mizahozaho, hoy ny fitenenana.